China mpanamboatra boaty taratasy sy mpamatsy | Hongning
zavatra Kraft boaty taratasy mora vidy sy mateza boaty samy hafa habe samy hafa loko isan-karazany Custom Logo fivarotana mafana fivarotana taratasy ho an'ny sakafo haingana
Loko Kraft taratasy loko Loko manokana
Size Taratasy Kraft
Fomba Fiarovana ny tontolo iainana
Kaomandy manokana Araka ny fitakiana santionan'ny mpanjifa
NOQ Fangatahana fanao
Loko Boaty taratasy fiarovana ny tontolo iainana
Size Boaty taratasy Sakafo haingana, boaty vary
Fomba Boaty taratasy azo ariana
endrika Habe mahazatra: habe namboarina 1 000: 10,000
Ny fizotry ny famokarana boaty taratasy.
Voalohany: taratasy fanamboarana taratasy, ity dingana ity dia misy ny taratasy fanamboarana sy ny tsindry fanerena. Ny manamboatra taratasy dia tsy mitovy amin'ny tariby manindry. Milina fizarana taratasy no raisina.
Hetezo ny baoritra mba hahatonga ny sisin'ny taratasy ho malama sy hilamina. Ny antsy manasaraka taratasy dia tsy maintsy maranitra, tsy mety hisy. Raha tsy maranitra ny lelany, dia ny sombin-kazo nendahina dia misy sombin-taratasy, loto, sns. Ny tsindry tsipika dia atao amin'ny alàlan'ny fampiasana ny milina fanapahana tsipika.
Faharoa: fanontana baoritra. Ny fanontam-pirinty dia manana pirinty tokana. Fanontam-pirinty tsotra izy io amin'ny alàlan'ny fampiasana karazana rojo fandefasana baoritra mankany amin'ny fanontana mivantana. Misy karazana fanontana hafa, toy ny fanontana roa sosona. Noho ny tsy fitovizan'ny akora fototra, hafa ny fandraisana taratasy. Somary ambany ny fahaizan'ny sasany mitroka, miadana kokoa ny tahan'ny fanamainan'ny ranomainty; Somary ambany ny fahaizan'ny sasany mitroka, haingana kokoa ny tahan'ny fanamainana amin'ny ranomainty.
Fahatelo: mitsofoka, mampiasa masinina mitete eo amin'ny baoritra vita pirinty, ny fitsipika fototra dia mitovy amin'ny masinina manapaka tsipika.
Fahefatra: boaty fantsika na boaty apetaka ampiarahina amin'ny baoritra, dia araka ny filan'ny mpanjifa amin'ny boaty fantsika na boaty apetaka. Raha mila fantsika boaty ianao mba hampiasa milina boaty, apetaho amin'ny boaty ny fampiasana masinina boaty.
Fahadimy: fonosana baoritra baoritra, baoritra voafatotra, ny fizarana fefy conveyor, fonosana ary famonosana.
Fahenina: trano fivarotana fanaraha-maso, ireo baoritra feno entana nalefa tany amin'ny trano fanatobiana entana.
Teo aloha: Kitapo taratasy
Manaraka: Kopy taratasy